ZTE Spro2 Review: A obere, dị ike na oké ọnụ projector | Akụkọ akụrụngwa
Pablo ortega | | General, Foto na ụda, Ndị na-egwu egwuregwu, Nyocha
Zlọ ọrụ ZTE esorola onye ọrụ US AT&T wepụta naanị ọnụ ọnụ obere projector. Nweta ihe nkiri na "nnukwu ihuenyo" site n'ụlọ, ma ọ bụ site na ebe ọ bụla, ga-ekwe omume site na obere ihe ngosi a, mana dị ike.
1 Otu o si arụ ọrụ
3 Hotspot tinyekwara
4 Enweghị Wifi ma ọ bụ LTE? Nsogbu adịghị
5 AT&T ZTE Spro2 Nka na ụzụ nkọwa
6 Mkpebi nke Editor
ZTE Spro 2 bụ nke obere, mana ọ dị ntakịrị, ọ bụ ezie na ọ naghị adị mfe ibu. Ọ nwere batrị dị ike nke ga-enye anyị ohere iji ya na-enweghị ịtinye ya n'ime isi ihe dị ka awa abụọ na ọkara, ọ bụrụ na anyị na-ekiri ihe nkiri, yabụ anyị nwere ike iwere anyị ebe ọ bụla.
Iji mee ya, ihe niile anyị chọrọ bụ ịgakwuru nke gị ise ihuenyo ihuenyo na onye ọrụ ya bụ nke kensinammuo, ọkachasị maka ndị ọrụ ahụ ejiri ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo. N'elu ihuenyo ya, n'akụkụ aka ekpe, anyị ga-ahụ nhọrọ iji rụọ ọrụ ma gbanwee ihe ngosi ahụ. O di nwute, Spro 2 anaghị ejikọta wiil nke na-enye anyị ohere iji aka anyị dozie akụkụ nke ihe oyiyi na ihuenyo ma ọ bụ na mgbidi ahụ, nke na-amanye anyị ka anyị banye ma ọ bụ dabere na nha nke onyogho anyi choro imeputa.
Ndị ọzọ nke menu dị mfe iji jikwaa, dịka ha gụnyere omenala gam akporo ngwa (dị ka ngwungwu Google, na Gmail na Google Play Music dịka ọmụmaatụ na enweghị nleghara anya YouTube, n'ezie) na anyị ga-enwe ohere ọ bụla na Google Play Store iji budata ngwa ọ bụla anyị chọrọ). Otu nke a na-apụghị ịhapụ, n'ezie, bụ Netflix, nke ga-enye anyị ahụmịhe nlele dị iche na dara oke ọnụ, maka ọnụ ahịa dị ọnụ.
Ndị na-emepụta ihe na China bụ ZTE arụ nnukwu ọrụ na ngalaba a, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ZTE Spro 2 na onye bu ya ụzọ, ZTE Projector Hotspot. A na-ekpuchi ihe ngosi ahụ na ihe yiri aluminom bụ n'ezie plastik, yabụ ọ bụrụ na anyị achọghị mmebi nke agba ahụ, anyị ga-akpachara anya na ọ ga-ekwe omume.
Ihuenyo aka site na sentimita anọ ruo ise na kwa ya mkpebi, nke ruru 1280 x 820 pikselụ. Ngwakọta sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 4.4 KitKat nwere akara ngosi mara mma nke na-akwado igodo.
Akụkụ ya bụ 134 x 131 mm, nwere ọkpụrụkpụ nke 31 mm na ibu nke 550 grams.
ZTE chọrọ ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ihe nrụpụta anyị ebe ọ bụla. N'ihi ya, ngwaọrụ ahụ nwere batrị dị n'ime ya ma jikọta Hotspot. Na LTE ọsọ nyere site AT & T Anyị nwere ike iburu onye ọkpụkpọ ahụ ebe ọ bụla ma nwee ọ movieụ nkiri na-asọ asọ na-enweghị ọnwụ nke ogo (ee, anyị ga-ezere ebe ndị mkpọ juru)
Na hotspot wuru na ZTE Spro 2 a Anyị nwere ike ịkekọrịta njikọ nke onye nrụpụta anyị yana ihe ruru ngwaọrụ iri n'otu oge. Ya mere, anyi agagh enwe ike igwu intaneti site na ihe nlere n’onwe ya, kama anyi g’enwe ohere nke inye ndi enyi anyi na ndi ezin’ulo anyi ndi ozo na iketa faili site na netwok nzuzo.
Enweghị Wifi ma ọ bụ LTE? Nsogbu adịghị
Akụkụ ọzọ dị mma nke ihe ngosi a bụ na ọ na-enye ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri nke na-enye anyị ohere ịmegharị vidiyo ọ bụla, ọdịyo ma ọ bụ ngosi ọ bụla (nke dị mma maka ọfịs). ZTE Spro 2 nwere ọdụ ntinye USB, HDMI na onye na-agụ kaadi microSD. Nhọrọ ọzọ bụ ime ka njikọ Wi-Fi n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ rụọ ọrụ ịkekọrịta ụdị faịlụ ọ bụla n'etiti projector na kọmputa. N'ime projector anyị nwere ike ịchekwa ihe ruru 16GB faịlụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri ndị a na-agbasawanye ohere nke iji ngwaọrụ, nke na-abụghị naanị ebe ntụrụndụ multimedia na ụlọ, mana enwere ike iji ya Ihe ngosi na klas, na ọrụ, ma ọ bụ ọbụna na-ekiri ihe nkiri n'ime ogige. Enwere ike igosi ihe oyiyi na ogo zuru oke na ncha ọ bụla dị larịị. Anyị emeela ule na mgbidi na-acha odo odo, na-enweta ezigbo nsonaazụ. Anyị zụtara otu panel ọcha na ogo oyiyi ahụ dị mma.
Atụmatụ ahụ nwere ike iru ihe ruru mita iri (karịa ihe karịrị mita atọ), mana ndị na-ekwu okwu agaghị adị oke ike ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ha, dịka ọmụmaatụ, n'èzí. Maka nke a, ọ ga-adị mma ma anyị jiri njikọ njikọ njikọta jikọọ ndị ọkà okwu dị ike ma ọ bụ na anyị nwekwara ike iji ya Njikọ Bluetooth.
AT&T ZTE Spro2 Nka na ụzụ nkọwa
• Ihe ngosi 200 LM.
• Batrị nwere ike nke 6300 mAh.
• Ndụ batrị na-asọba: 2.5 awa ihe dị ka.
• Ndụ batrị maka igodo: 16 awa.
• Snapdragon 800 processor.
• 16GB ikike nchekwa.
• Hotspot nwere ngwaọrụ iri ejikọrọ n'otu oge.
• Dual Band: anyị nwere ike ịhọrọ n’etiti 5GHz ma ọ bụ 2.4GHz.
• HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri.
• Ọdụ USB.
• SD kaadị agụ.
• KitKat 4.4 sistemụ arụmọrụ
Nyochaa: Pablo ortega
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkachamara na-arụ ọrụ na ọnụahịa dị ọnụ ala anyị nwere ike iji mee ihe ọ bụla. Anyị gosipụtara batrị ya, njikọta LTE na ogo ya.
Don'tnweghị oke njikwa maka ogo nke ihe oyiyi na ọnọdụ ya. Ndị na-ekwu okwu n’ime ya anaghị enye oke mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-egwu egwuregwu » ZTE Spro2 Review: A Portable, Ike na oké ọnụ Projector
Enwere okwu karịa banyere Ihe niile belụsọ ogo ogo